१५ कात्तिक, खोटाङ -जिल्ला अस्पताल खोटाङमा दन्त सेवा शुरु गरिएको छ । दन्त विशेषज्ञ एञ्जिला श्रेष्ठलाई करारमा ल्याएर अस्पतालमा पहिलो पटक दन्त सेवा शुरु गरिएको हो । अस्पताल स्थापना भएको २६ वर्षपछि अस्पतालमा विशेषज्ञसहितको दन्त सेवा थालिएको जिल्ला अस्पतालका प्रमुख चिकित्सक रामबहादुर केसीले बताउनुभयो । २०४८ सालमा स्थापना भएको अस्पतालमा दाँतका समस्या भएका बिरामीको संख्या
१४ कार्तिक,काठमाण्डौ – एसीडीटी केवल पेटमा मात्र नभई मुखमा पनि हुन सक्दछ । अझ यति मात्र नभई एसीडीटीको असर पेटमा मात्र नभई मुखदेखि लिएर खुट्टासम्म नै असर पर्दछ । यस्ता कयौं कारणहरू छन् जसले एसीडीटी निम्तयाउने गर्दछन् । यी कारणहरू भिन्नै किसिमका छन् जसले हामीलाई नै अचम्ममा पार्दछन् । अधिक थकान : बहुत अधिक थकान
१३ कात्तिक,कञ्चनपुर – आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतिको महत्वबारे कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका सर्वसाधारणले बुझ्न थालेका छन् । रोग निवारणका लागि आयुर्वेदिक औषधि प्रभावकारी सावित भएपछि सर्वसाधारणको औषधालयप्रतिको आकर्षण बढ्न थालेको हो । झलारी आयुर्वेद औषधालयमा उपचार गर्न पुग्ने बिरामीको संख्यामा विगतको तुलनामा तीनगुणाले वृद्धि भएको छ । आयुर्वेदिक औषधिले शरीरमा रहेको विकारलाई नियन्त्रण गरी पूर्णतया रोगलाई निवारण
१२ कात्तिक ,बर्दिवास – महोत्तरी जिल्लाको बर्दिवास क्षेत्रमा डेंगुको त्रास फैलिएकोे छ । गत असोजको तेस्रो सातामा पाँच जनामा डेंगु देखिएयता दिनहुँ डेंगुका रोगी बढ्दै गएका छन् । बर्दिबासका शुभ स्वस्तिक हस्पिटल, जनसेवा हस्पिटल र बर्दिवास अस्पतालमा अहिले डेंगु संक्रमित उपचार लिन र डेंगुको शंका भएकाहरु रगत जाँच गराउन आएका छन् । अहिलेसम्म बर्दिबास क्षेत्रका
११ कात्तिक,चितवन – एचआइभी संक्रमितलाई दिइदै आएको एआरटी औषधि अब संक्रमणको जोखिममा रहेकाले पनि पाउने भएका छन् ।रगत परीक्षण गरी सिडीफोर भन्ने तत्वको मात्रा कम भएमा मात्रै औषधि दिने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी सबै संक्रमित र संक्रमणको जोखिममा रहेकालाई समेत निःशुल्क औषधि दिने व्यवस्था गरिएको हो । संक्रमितले देशका विभिन्न ६८ स्थानमा रहेका एआरटी सेन्टरबाट निःशुल्क औषधि
९ कार्तिक,काठमाण्डौ – कपाल झरेर दिक्क हुनुभएको छ ? कुनै पार्लरमा गएर हेयर ट्रिटमेन्ट गरेर कपाल र्झनबाट जोगाउने सोँचमा हुनुहुन्छ र ? त्यसोभए पार्लरमा गएर पैसा नखन्याउनुहोस् । तपाइँ आफैले केही जुक्ति लगाउनुभयो भने तपाइँको कपाल र्झन कम हुनेछ । यसको लागि केही प्राकृतिक वस्तु तथा विधि काफी छन् । तल उल्लेखित सजिला टिप्स अपनाउने
८ कार्तिक,काठमाण्डौ – थाइराइड हाम्रो शरिरको एक प्रमुख इन्डोक्राइन ग्रन्थी हो जुन गलामा हुन्छ । यो तिल आकारको हुन्छ । भारतको अपालो अस्पतालका वरिष्ठ एन्डोक्राइनोलोजिस्ट डा। सुबोध बांझलका अनुसार थाइराइडबाट रिलिज हुने हर्मोनबाट शरिरको मेटाबोलिजम रेट कन्ट्रोल हुन्छ । जब यी हर्मोनको ब्यालेन्स बिग्रन्ट तब हाम्रो शरिरिक क्रियाकलाप गडबड हुन थाल्छ । कति प्रकारको हुन्छ
७ कार्तिक, झापा – झापामा हालसम्म डेंगुका कारण कसैको मृत्यु नभएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । डेंगुका कारण मृत्यु भएको भनिएको बिर्तामोड नगरपालिका–४ विर्ताबजारका ४० वर्षीय उमेश साहको अन्य कारणबाटै मृत्यु भएको उक्त कार्यालयका स्रोत व्यक्ति कुलबहादुर पौडेलले जानकारी दिए । । “साहको अन्य कारणबाट मृत्यु भएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “हामी अनुसन्धान गर्दैछौँ ।” मृतक
३१ असोज,म्याग्दी – बेनी अस्पतालमा दैनिक हुने फोहरको उचित व्यवस्थापनमा जर्मनबाट आएका दुई मेडिकल इन्जिनियरले सघाइरहेका छन् । करिब तीन साता अगाडि नेपाल आएका जर्मनको एक विश्वविद्यालयमा मेडिकल इन्जिनियरिङमा अध्ययरत मेक्सिमिलियनल र एन्टोनियाले अस्पतालभित्र दैनिक संकलन गरिने फोहरको वर्गीकरण र विसर्जनको विधिसहित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको फोहर विसर्जनका लागि इन्सिनेटर प्रविधि जडान गरेका छन् । जर्मनको एक